Ngubani ofuna ukulawula i-inthanethi? | Kusuka kuLinux
Ngubani ofuna ukulawula i-inthanethi?
UCharlie-Brown | | Izaziso
Okwakamuva isihloko ngu-Violet Blue we I-Pulp Tech kushicilelwe ku- ZDNet, usazisa ukuthi, ngoMsombuluko ozayo, i-International Telecommunications Union (i-ITU), okuyiNdikimba Yezizwe Yezokuxhumana Ngocingo, izoqala eDubai iNgqungquthela Yomhlaba Yezokuxhumana Ngamazwe Ngamazwe (I-World Conference on International Telecommunications), ezohlangana, ngemuva kweminyango , kuze kube ngumhla ka-14. Kule ngqungquthela kuhloswe ngayo ukufinyelela esivumelwaneni mayelana nokubuyekezwa okuhlongozwayo kwe-International Telecommunication Regulations (ITR), ngenhloso yokwandisa ububanzi bayo bokulawula nokulawula i-intanethi esiyaziyo namuhla.
Cishe kuqinisekile ukuthi awuzwanga lutho ngale ngqungquthela, ngoba ngokungafani nabanye ababanjwe ngaphansi kwenhlangano yeZizwe Ezihlangene, bekungeyona into yokuphakanyiswa kwabezindaba, ngisho nakulabo abangaphansi kwalesi sigungu ezamazwe omhlaba. Lokhu akukhona ukuqondana kwezinto, ngoba kusukela emizuliswaneni yokuqala yezingxoxo, bekuzanywa ukuyigcina ikwazi ukubukwa ngumphakathi ngangokunokwenzeka, kodwa, ngenhlanhla kuwo wonke umuntu, olunye ulwazi seludaluliwe ngezimangalo zohulumeni abathile.
Umbhalo we-TD-64 nalokho okuqukethe
Yize esidlangalaleni ukubuyekezwa kubonakala kugcwele izinhloso ezinhle, ngenxa yewebhusayithi WCITUkuvuza, edalwe ngabaphenyi abavela eGeorge Mason University, okusalungiswa kokugcina kokubuyekezwa okuhlongozwayo kweMithethonqubo Yezokuxhumana Ngezizwe Yomhlaba Wonke, eyaziwa njenge idokhumenti TD-64, equkethe, phakathi kwezinye eziningi, iziphakamiso ezilandelayo:
Izwe eliyilungu linelungelo lokwazi ukuthi ithrafikhi yalo ihanjiswe kuphi futhi linelungelo lokubeka noma yimuphi umthethonqubo kumgwaqo obuzwayo, ngenxa yezizathu zokuphepha noma ukuvimbela ukukhwabanisa.
Inikeza ilungelo emazweni angamalungu ukuthi amise izinsizakalo zokuxhumana ngocingo zomhlaba wonke, ngokuphelele, ngokwengxenye kanye / noma ngohlobo oluthile, olungenayo, oluphumayo noma oludlulayo.
Kuyakwenqabela ukungaziwa kwegama lomgwaqo futhi kuphoqelele ukuhlonza abasebenzisi bezinsizakalo zokuxhumana ngocingo.
Hhayi ize, omunye umbhalo Kuputshuke yi-WCITLeaks, iveze ukuthi abagqugquzeli balungiselela umkhankaso wezobudlelwano nomphakathi ukugwema ukwenqatshwa okungaphezu kwalokho obekulindelekile kwemibono yomphakathi naphezu kwalezi zimangalo.
Kodwa-ke, ngubani obangela le "mithetho" emisha? Ngabe bazoba abasolwa abajwayelekile okujwayele ukubacasukela uma kukhulunywa ngokwephula amalungelo ethu enetheni?
Ngokuphikisana nalokho obekulindelwe abaningi, abagqugquzeli abakhulu bale ngqungquthela kanye nezinguquko ezihlongozwayo abayona i-CIA noma iMossad, kunalokho ngohulumeni abangenawo amasiko amahle maqondana nokufinyelela olwazini mahhala. Kubhekisa, njengeChina neRussia, ngeminye imibuso ehlanganyela izintshisekelo ezifanayo ngokulawulwa nemikhawulo.
Emhlanganweni owabanjwa ngoJuni nyakenye noDkt Hamadoun Toure, uNobhala-Jikelele we-ITU, uVladimir Putin, owayenguNdunankulu waseRussia ngaleso sikhathi, wamemezela inhloso yeRussia yokubamba iqhaza elibonakalayo "ekusungulweni kokulawulwa kwamazwe omhlaba kwi-inthanethi kusetshenziswa amakhono okuqapha nokwengamela we-ITU. '
Wayeseke wayizama phambilini, ngoSepthemba 2011, lapho bekuhlangene neChina, Uzbekistan kanye neTajikistan, bahambisa ekwamukelweni yiNhlangano Yezizwe Jikelele isiphakamiso se "International Code of Conduct for Information Security" ngenhloso yokusungula "izinkambiso nemithetho yamazwe omhlaba ebeka izinga lokuziphatha kwamazwe maqondana nolwazi kanye ne-cyberpace", kunjalo, njengoba bekulindelekile, ngaphansi kwezinhlaka zohulumeni futhi kuvunyelwe ngenkulumo yezinsolo zentando yeningi yabantu abavela kwamanye amazwe.
Kusukela ngoMeyi odlule sasixwayiswe ngomunye “wobaba” be-intanethi, uVinton Cerf embhalweni wakhe owashicilelwa kwiNew York Times “Gcina I-Inthanethi Ivulekile”(Gcina i-inthanethi ikhululekile), lapho achaze ngokunembile izinhloso zale ngqungquthela nokuthi ngubani owayengaphansi kwayo, kanye nobungozi nezinsongo ezingaba khona ezikushoyo ngekusasa lenethiwekhi, hhayi kuphela ngenkululeko yokulahlekelwa abasebenzisi, uma kungenjalo futhi ukunyamalala kwento engavinjelwe emisha ebonakalise ukuthuthukiswa kwenethiwekhi selokhu yadalwa. Ngenxa yesimo esibucayi salesi simo, uCerf ufune ukuthi impikiswano ephathelene nokuphathwa kwe-intanethi kufanele ibe sobala futhi ivuleleke kubo bonke ababambiqhaza, kepha abagqugquzeli bahlala bengezwa kulezi zimangalo.
Okwamanje, kubonakala sengathi konke kuzohlala ezinhlosweni, ngenxa yezizathu eziningana; Ngakolunye uhlangothi, i-United States, ngokusebenzisa i- isitatimende esikhishwe nguMnyango Wezwe, ngezwi lommeleli wakhe engqungqutheleni, Inxusa uTerry Kramer, ukubeke kwacaca ukuthi uphikisana ngokuqinile nanoma yimuphi umzamo wokubeka i-intanethi ngaphansi kolawulo lweZizwe Ezihlangene, ngasikhathi sinye, iPhalamende laseYurophu nalo selizwakalise ukuphikisana kwalo nalesi siphakamiso.
Vele abanye bazothi, lokhu kuphikisana okwenziwa yi-United States akulona iqiniso, ngoba ekugcineni kosuku, kungaqondakala ukuthi, ngandlela thile, i-inthanethi ilawulwa yiyo, ngoba i-ICANN (Internet Corporation for Assigned Amagama nezinombolo noma i-Internet Corporation Yokwabiwa Kwamagama Nezinombolo), nezinye izinhlangano ezihlobene, zingaphansi kwegunya loMnyango Wezohwebo, ongavimbanga kuze kube manje, ukusebenza kwenethiwekhi ngaphansi kwamazinga avulekele wonke umuntu.
Ngakolunye uhlangothi, i-ITU uqobo, ngokusho kwezitatimende zikaNobhala Jikelele wayo, ithe noma yiluphi uhlobo lwesinqumo olwamukelwe kumele lusekelwe ngazwilinye kuwo wonke amalungu alo, njengoba kuyinqubo ejwayelekile yomzimba futhi engacabangi ukuthi izindaba ezinjengalezi kufanele zivotelwe, ngoba ziyizinqubo okungafanele zivunyelwe ngaphakathi kwenhlangano futhi, kusobala, lokhu kuvunyelwa ngazwilinye akunakwenzeka okwamanje.
Kuya ngathi sonke
Kodwa-ke, lezi zizathu azikwazi ukwakha, ngokwazo, uthango oluphikisana nezinhloso zokubeka i-intanethi ngaphansi kolawulo lohulumeni noma umgwamanda okuthiwa ungowangaphandle, ngoba labo abaphikisana nanamuhla bangeke benze njalo kusasa futhi kukithi sonke, abasebenzisi be-inthanethi, qinisekisa ukuthi ihlala ikhululekile futhi ivulekele wonke umuntu.
Kungakho-ke kufanele sisikhuthaze lesi siphakamiso ngazo zonke izindlela Thatha isenzo iphromothwe yiGoogle, lapho ithi khona "Umhlaba okhululekile futhi ongenamkhawulo uncike kwiWebhu ekhululekile futhi engenamkhawulo. Ohulumeni akumele banqume ikusasa le-Intanethi ngokuzimela. Umbono wezigidigidi zabasebenzisi emhlabeni wonke abasebenzisa i-Intanethi, kanye nalowo wochwepheshe abasungule futhi balondoloze inethiwekhi, kufanele ubhekelwe "
Ngisivele ngisisayinile isicelo, ngiyakukhuthaza ukuba wenze okufanayo, uma siqhubeka nokulinda, sizibeka engcupheni yokuthi lapho senza izinqumo zethu kuzobe sekwephuze kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ngubani ofuna ukulawula i-inthanethi?
Amazwana ayi-22, shiya okwakho
Masisebenzise iLinux kusho
Kuyinkinga enzima kakhulu.
Ngokomthetho, iningi lizovuma ukuthi "asifuni uhulumeni angenelele," "sifuna i-Intanethi yamahhala," njalonjalo. Ihlotshaniswa ngokushesha namacala aseCuba, eGibhithe noma eSyria. Akekho umuntu ongamukela ukuvinjelwa engqondweni yakhe efanele, kungaba nge-Intanethi noma ngezinye izindlela.
Kodwa-ke, ukuphikisana okulandelayo kuqhubeka kunginaka: le mpikiswano okuthiwa "iyaqhubeka" ngokusobala inenkululeko ngokwemvelo, futhi ithatha ukuthi ohulumeni babi futhi izinkampani (iGoogle) zilungile.
Angisho ukuthi vumela ukuvinjelwa eCuba. Kepha kubonakala kimi ukuthi ama-STATES kufanele angenelele kweminye imibuzo abayenza kwi-Intanethi. Isibonelo, ubugebengu obenziwa nge-inthanethi: ukwebiwa kobunikazi, umkhonyovu we-Intanethi, i-pedophilia, njll.
Ekugcineni, ngikuthola kuthakazelisa ukucacisa ukuthi ama-STATES amaningi (ngezinkantolo noma ngezinyathelo ezithinta abahlinzeki be-Intanethi, ukumelwa kwabo ngaphambi kwe-NIC, njll., Njll.) Sebevele bangenela kwi-Intanethi. Ngakolunye uhlangothi, i-Intanethi ayikhululekile njengoba kufanele ibe njalo (hhayi ngoba kungenelela ohulumeni kepha imvamisa kungenxa yokungenelela kwezinkampani: ake sicabange ngabahlinzeki be-inthanethi abavimba abasebenzisi abasebenzisa i-p2p, amasayithi avimba iGoogle , I-Facebook nabanye abaningi abasebenzisa futhi bathengise imininingwane yethu eyimfihlo, njll, njll., Njll.)
Ngikholwa ukuthi ukulawulwa kwe-Intanethi KUYADINGEKA futhi, njengoba ngishilo, ukuthi kuqale isikhashana esedlule (noma ngabe kunendlela elinganiselwe). Kunoma ikuphi, inkinga ukuthi hlobo luni lomthethonqubo olufunwayo: olwamukelwa emhlabeni wonke (okuyilona, ​​empeleni, olungasho ukuthi kuncishiswa "ukuqothulwa" kwabanye ohulumeni) noma okubeka ngokusobala ubukhosi baseNyakatho Melika (ake sicabange ukuthi i-ICANN isebenza manje).
Masingakhohlwa ukuthi le mpikiswano yenzeka esimweni lapho ukukhiqizwa kwamasiko amakhulu kuvela e-US nase-Europe (cabanga ngamabhayisikobho esiwabukayo noma umculo esiwulalelayo) nokuthi i-Intanethi ibabheka njenge- «ingozi» . Kungakho bephikisana nomthetho "wendawo yonke" abathi ngeke kwenzeke futhi baxoxisene ngezivumelwano zokulawula i-Intanethi ngaphandle kwe-UN, njengeBudapest Convention on Cybercrime lapho onyawana bacishe bafakwa ebangeni elifanayo nalowo landa umculo ngokungemthetho. Yilapho kukhona ingozi!
Kodwa-ke, ngibona le nkinga ngokombono "waseNingizimu", yiZizwe kuphela ezingenza lokhu kuxoxisana (okungazuzisi kuphela amathuluzi amasiko aseNyakatho) futhi iMelika yibo bodwa abakwaziyo ukusebenzisa ukulawula okudingekayo ukuqinisekisa amalungelo ezakhamuzini zayo (ngokwesibonelo, ngezoBulungiswa njengoba sibonile emacaleni esengike ngasho). Ngakolunye uhlangothi, inkinga ukuthi i-Intanethi yinto yomhlaba wonke, ngakho-ke, kunzima kakhulu ukusebenzisa le mithetho (ake sicabange ukuthi imininingwane yesakhamuzi sase-Argentina esizizwa sikhungathekiswe yi-Facebook, ake sithi, isendaweni US, hhayi e-Argentina).
Noma kunjalo, ngikhiphe imibono eminingana kodwa ngicabanga ukuthi uyaqonda ukuthi bengisho ukuthini.
Ngiyethemba ukuthi ngisizile ekuboniseni futhi ngicebise impikiswano.
Phendula ku-Masisebenzise i-Linux
Ukucabanga okuhle kakhulu.
Ngikushiyela i-athikili enempikiswano emayelana nokuziphatha kabi kwabantu kanye nenkululeko yokukhuluma (ngiyakuxwayisa kusengaphambili ukuthi noma ngabe ngiyisigebengu, angihlanganyeli esikhundleni sikaRick)
Uxolo ngokungakuphenduli phambilini, kodwa ngichithe usuku lonke ngizama ukuvula isixhumanisi futhi kubonakala sengathi isayithi alikwazi ukufinyelelwa ... kungenzeka ukuthi yizinkinga zami zokuxhuma; nganoma iyiphi indlela, ngaphandle kokukwazi ukufunda ukuthi usho ukuthini ukuthi ngizoba nombukiso osuselwa esihlokweni esiqukethwe kusixhumanisi.
Ngiyakuqonda ukuthi imiqondo yokuziphatha isishintshile ngokuhamba kwesikhathi, okwenzekayo ukuthi kulolu daba oluthile, ukuthambekela kube wukwanda okuqhubekayo eminyakeni yabantu yokubheka ubudlelwano bezocansi njengokuvumelana; Uma esikhathini esingaphezudlwana kwekhulu leminyaka edlule ibhungu elineminyaka engu-12 noma engu-13 lathathwa "njengowesifazane" ofanele umshado, namuhla akunjalo emazweni amaningi "aphucukile" futhi ngifaka engcupheni ukusebenzisa lesi sichasiso. Ukuze ngibe nempikiswano. Le nqubo yamukelwe ngabantu abaningi futhi ngikholelwa ukuthi ingabhekwa njengohlobo lokuvikelwa kwezingane nentsha engakabi sesimweni sokuzithathela izinqumo ezifanele. Ngicabanga ukuthi ukwenza umphakathi wonkana wamukele ushintsho kulesi sikhundla kuzoba yinto engenakwenzeka.
Ngakolunye uhlangothi, ngicabanga ukuthi ukwenziwa njengobulelesi bokunye ukuziphatha kunethuba lokuzuzwa ngokuzayo; Sekuvele kuliqiniso ukuthi insangu isemthethweni ngokusemthethweni kwamanye amazwe noma ezifundazweni, njengoba kwakunjalo nophuzo oludakayo ekhulwini leminyaka elidlule, kepha qaphela ukuthi lezi yizindlela zokuziphatha ezithinta kuphela labo abazenzayo, ngenkathi zibhekwa njengezigebengu zisebenza kuphela ekucebiseni ama-mafia nokukhuthaza ezinye izinhlobo zemisebenzi yobugebengu.
Noma kunjalo, kunendwangu eningi okufanele isikwe lapha, futhi ungakhathazeki, akukaze kufike engqondweni yami ukuthi wabelana ngesikhundla salo Rick, nami ngingoweqembu lalabo abathanda ukuqhathanisa imibono, ikakhulukazi abacabanga ngokuhlukile, ngoba ukuphela kwendlela yokufunda nokuqonda abanye.
Into enhle uthathe inkinga ukubhala lo mbhalo @Charlie, ngiyabonga!
Manje sengiyihlanganyela ne-LUG ukubona ukuthi siyaxhumana yini namanye ama-LUG nezinhlangano ze-SL futhi sethula inothi elisemthethweni kwiHhovisi likaMongameli, elinye kwi-NIC futhi ekugcineni eMnyangweni Wezangaphandle Nezenkolo.
Kuyathakazelisa ukuthi yiGoogle, imikhuba yayo maqondana nokuhlonipha ubumfihlo babasebenzisi ingaphezu kokungabazisayo, ngubani owenza isinyathelo sokuphikisana nokulawulwa kwe-Intanethi ... kepha yilokho okushiwo yi-UsemosLinux, kunjalo ukuthathela phansi ukuthi iZizwe zimbi futhi zizohlala zizama ukukulawula nokukuphoqa, ngenkathi izinkampani zilungile futhi imikhuba yazo ihlala iyisibonelo futhi iyahlonipha, futhi lokhu akunjalo, ngoba amazwe aseMelika anemikhawulo yawo emingceleni ngenkathi izinkampani ezinkulu zisebenza emhlabeni jikelele. futhi akekho noyedwa osiqinisekisayo ukuthi inkampani yamazwe amaningi esesimweni esinamandla ngelinye ilanga ngeke isebenzise imikhuba edelelekile ekufuneni inzuzo ephezulu nganoma iyiphi intengo. Ngalo mqondo, umhlaba obhubhisayo ufika engqondweni lapho yonke imikhiqizo, ezokuxhumana ngocingo, impilo uqobo lwayo, ingaphansi kwenkampani enkulu enkulu, njenge-Umbrella ku-Resident Evil saga (yize ingenawo ama-Zombies, kunjalo xD), futhi Ngiyazi ukuthi manje kuyinganekwane nje, kepha ake ucabange ingozi yokuthi konke kwakulawulwa izinkampani ezizimele.
I-Google ayifuni ukugcina iwebhu ivulekile ngoba ikhathazekile ngendaba yezenhlalo kepha ngoba iwebhu yibhizinisi labo nomoya abaphefumulayo.
Kodwa-ke, nangazo zonke izinsolo ezingenziwa enkampanini, iqiniso ukuthi yiCoca-Cola, iLatte Shake yenetha: kuyamangaza ukuthi ipulatifomu yabo isebenza kahle kangakanani abahlinzeka mahhala kuwo wonke umuntu futhi ukube bekungeyakwaYahoo!, Buza, iMicrosoft noma i-Altavista ngabe sisesikhathini samatshe wewebhu.
Ngivumelana nawe, kepha ngikutshela okunye, kuliqiniso ukuthi intshisekelo yeGoogle nayo ingokwezomnotho, kepha ngokwami ​​ayingikhathazi nakancane, ukube bezingekho, ngabe sisaqhubeka sinamabhokisi eposi angama-250MB, sikwazi ukufinyelela kuwo iwebhu futhi ukhokhela noma yini enye, ngakho-ke uma iGoogle yenza imali ngabakhangisi futhi ingaphumi emaphaketheni ethu, wamukelekile, kulokhu izintshisekelo zakho nezethu ziyafana, ngakho angiboni lutho olungalungile ngalokho.
Ake sibone, njengoba uJack the Ripper angasho, sihamba ngezingxenye:
Umehluko "qhubeka" vs "ovulekile" awusho ngokuzenzakalela ukuthi ohulumeni babi futhi nezinkampani zilungile, iqiniso ukuthi ohulumeni (noma kufanele babe) ukuqinisekisa inkululeko yezakhamizi futhi basungule futhi basebenzise imithetho efanayo kuwo wonke umuntu , kanti inhloso yezinkampani ukudala ingcebo (YEBO, yize kwabanye ukukhuluma kwaleli gama kubangela ukucasuka). Angicabangi ukuthi kunesibonelo esingcono sokuthi yini engafinyelelwa ngaphandle "kwemithetho" kahulumeni kunokuthuthukiswa kwe-intanethi uqobo. Angazi lutho "olukhululekile" kune-intanethi nokukhula komnotho womhlaba wonke kuso. Kodwa-ke, ukuthi ohulumeni abayifezi ingxenye yabo "enkontilekeni", ikakhulu, kungumthwalo wezakhamizi ngezindlela ezimbi ezikhona zokusebenzisa amalungelo abo futhi, kungani kungenjalo, ngokunganaki nokungabi nandaba nalokhu. izingqinamba, uma okuthile kufanele kushaywe umthetho futhi kuguqulwe ngaphakathi kohlaka lwe-UN, kunjalo impela.
Inkinga ngezinkampani ukuthi kumele zihambisane nemithetho, futhi ukufuna nokuqinisekisa ukuthi ngohulumeni. Okumele kube khona umthetho oqinisekisa, ngakolunye uhlangothi, "ukudlala ngokulingana" okugcina kuzuzise thina sonke futhi, ngakolunye uhlangothi, ukuthi amalungelo ethu njengabantu ngabanye awephulwa. Ukuthi izinkampani ziyazuza olwazini lwethu kungukuzibophezela, kwezinye izimo, kokushoda komthetho maqondana nalokhu, ngoba impilo seyedlula umthetho ohamba kancane njalo, kanti ngakolunye uhlangothi futhi kungumthwalo wabantu uqobo abafake izandla zezinkampani ngemininingwane yokugcina yempilo yakhe, ngaphandle kokukhathazeka ngokufunda imigomo yokusetshenziswa nhlobo. Iqiniso lokuthi insiza "imahhala" ayisiphoqi ukuthi siyisebenzise, ​​sikwenza ngoba sikhetha ukwenza njalo, noma singayinaki imiphumela.
Ngakolunye uhlangothi, ukushushiswa kwezigebengu ezisebenzisa ubuchwepheshe be-IT ukwenza ubugebengu bazo akuxhomekile emithethweni yezwe lonke ekusebenzeni kwenethiwekhi, ngoba lokho kwanele ukuthi izikhungo ezihambisanayo zenze umsebenzi wazo. Empeleni, cishe bonke ohulumeni, ngaphakathi kwezinsiza zabo zamaphoyisa, amaqembu azinikele ebugebengwini be-cyber, okuthi, njengokujwayelekile, babambisane, banikezwe izici zomhlaba wonke zobugebengu. Izikhathi eziningi ukushiyeka kulokhu kubangelwa ukwehluleka kwezomthetho emithethweni yezwe ngalinye, noma ukungabi bikho kokusebenzisana phakathi kwezinhlaka, noma ukungabi nentando yohulumeni, hhayi isidingo
Ngikuthola kungajabulisi ukuphakamisa ukuthi ukugcina i-inthanethi yamahhala kuvumela ukuphoqelelwa kwamasiko asenyakatho (noma ngabe kusho ukuthini lokho), ngoba iyona kanye i-intanethi evumela ukubonakala kwezimo zamasiko kuze kube izolo kunganakwa ngumhlaba nalabo abakwenziwa ngabezindaba bendabuko hhayi ukunikela ukumbozwa, ngakolunye uhlangothi, ngokwami, ngicabanga ukuthi i-dichotomy "enyakatho" vs "eningizimu" kungenye into engekho isisekelo, ngenxa yobuchwepheshe "basenyakatho" namuhla singakwazi ukugcina le mpikiswano "eningizimu" .
Isimo esithile se-ICANN siwumphumela wokuvela nokuthuthuka kwenethiwekhi, manje, ngithanda ukuthi umuntu asho iqiniso elithile lapho ukwenziwa kwezinqumo ezindabeni eziyinhloko ngaphakathi kwe-ICANN kuye kwaphazanyiswa ukuzithoba kwayo ekuhwebeni koMnyango. Akunakwenzeka kimi ukuba ngicabange ukusebenza ngempumelelo nokushesha kwesidalwa esinjengalesi ngaphansi kwegunya lezinsiza zokuphatha zezinhlangano ze-UN, empeleni, okufanele zibe khona ukuze kuqinisekiswe ezingeni lamazwe omhlaba, kanye nohulumeni ezingeni likazwelonke.
Ukuqonda ubudlelwano obuthile phakathi kwe-US ne-inthanethi akulula, into elula ukuphinda imibono eyeqisayo. Ukuze uyiqonde kangcono le ndaba, ngincoma ukuthi ufunde udaba lwentatheli uJorge Ramos, okuthi noma lushicilelwe ngo-2005, lusasebenza ukukhombisa okuningi maqondana nalokhu, nansi isixhumanisi: http://jorgeramos.com/el-dueno-de-la-internet/
Ngokuqondene nokulingana kokuthiwa ubugebengu bokuqukethwe nobugebengu obufana nokubulala izingane, kubonakala kimi kungubuwula ngokuphelele. Ngingumvikeli wenkululeko yokwabelana ngolwazi njengesidingo sokuthuthuka kwabantu.Manje, ngikholelwa ukuthi sesifinyelele kulokhu okungenangqondo ngenxa yethonya labanikazi bokuqukethwe kohulumeni; e-US, umculo, ifilimu kanye ne-TV lobbies, eSpain i-SGAE edume kakhulu, njll, ekhombisa futhi ukushiyeka kukahulumeni njengendlela yokulawula engakhethi futhi esebenzayo. Ukube ohulumeni bebezinikele ekuphoqeleni imithetho yizinkampani esikhundleni sokuqapha nokulawula izakhamizi zabo, ingxenye enhle yenkinga ibingaxazululwa.
Uxolo nge-billet, kepha bengingafuni ukuyeka ukuthinta noma yiziphi izihloko okuxoxwe ngazo kumazwana, engiwazisa kakhulu, ikakhulukazi ngoba asivumela ukuba sibe nenkulumompikiswano okufanele ibe nesithakazelo kubo bonke kodwa ngeshwa ihehe ezimbalwa. Lapho ngibona lokhu ngihlala ngikhumbula umusho engiwufunde ndawana thile, 'ngisho nalabo abangenantshisekelo kwezepolitiki bagwetshiwe ukuzwa ubunzima'
Ngiyabonga kakhulu ngokuma ngo ...
Ukushiyeka kwalabo hulumeni uma kukhulunywa ngokuzivumela ukuthi bacindezelwe yizikhungo ezinkulu kungenxa yezintshisekelo, ezibonakalayo noma cha, abanazo ezinkampanini zalawo ma-lobbies, lapho bengeyona ingxenye yebhodi yabo yabaqondisi ngqo . Lezi yizizathu zamadili afanelekile kanye "nokusebenzisana" okwenziwa eSpain ezinhlanganweni ezifana ne-SGAE noma e-US kumikhandlu yezamabhayisikobho nomculo. Futhi sikhuluma ngohulumeni abakhululekile, kepha masingakhohlwa ukuthi umqondo wabo wenkululeko usekelwe enkululekweni yamandla ezomnotho, nangaphezulu kwaleyo yabantu uqobo, kanye nokungabekwa kwemingcele ekuqongeleleni imali enkulu.
Kuyiqiniso lokho okuphakamisayo mayelana nokuhlangana phakathi kohulumeni kanye nezintshisekelo zamaqembu ashiwo ngenhla, ekugcineni okuwumphumela wokusetshenziswa kwentando yeningi okungalungile Ngakolunye uhlangothi, ngombono wami, khona kanye "nokukhululeka emandleni ezomnotho" owukhulumayo kungumphumela oqondile wenkululeko yabantu, ukuba khona kwe-inthanethi kufakazela lokhu, labo kuze kube yizolo babeyizinto ezingabalulekile ngaphakathi uhlelo, abafundi ababili abalula (abadali beGoogle), namuhla bangabahlanganyeli abakhulu ekwakheni kabusha ikusasa. Lokho akuzange kuzuzwe osopolitiki noma abaholi banoma yimiphi imibono ethembise okuningi.
Impela, inkululeko yezomnotho ivela enkululekweni yabantu. Inkinga iba lapho abantu abathile behlomula ngokwezinga elithile kuleyo nkululeko yezomnotho baze bagcine sebengabanikazi bohlelo lonke bese beqala ukusebenzisa imithetho ukuqhubeka nokuqongelela amandla amaningi ngokwengeziwe, sekuvele kwabiza inkululeko namalungelo umhlaba wonke. Kuyaziwa ukuthi kwabanye ukuze babe nokuningi, abaningi kumele babe nokuncane kakhulu.
Kuyiqiniso, iGoogle iqale njengabafundi ababili "abangabalulekile" (angilithandi neze lelo gama, ngicabanga ukuthi wonke umuntu unesabelo sakhe sokubaluleka), futhi bakwazile ukudlala ubuqili babo bokukhuphuka ezikhundleni ngokusebenzisa ngokunenzuzo ukusebenza wohlelo lomnotho womhlaba. Kepha kulelo zinga, into akuyona nje ubunjiniyela. IGoogle ikhule kakhulu futhi isuke ekubeni iphrojekthi yababonisi abambalwa yaba yinto enkulu yomhlaba, okuthi noma ubukhulu bufinyelelwe, busesandleni seqembu elincane labantu kuphela. Futhi kulapha, lapho abambalwa besebenzisa imithetho yeningi, lapho ukuhlanekezelwa kwentando yeningi kwenzeka, futhi ngenxa yalokho, ukusetshenziswa kwayo okunenkinga.
Ngikusho nje qaphela izinkampani ezisebenzisana nabanye.
«Kuyaziwa ukuthi kwabanye ukuze babe nokuningi, abaningi kumele babe nokuncane kakhulu…… woza, ngempela?… Uma ufunda ingcosana yemfundiso yezomnotho, hhayi amapheshana noma ama-manifesto, uma kungenjalo ithiyori yezomnotho eyiqiniso, uzobona ukuthi ingcebo kanye nomnotho wezizwe ASIKHO isamba zero; Ingcebo idalwa ezinhlelweni zokukhiqiza, noma ngabe ziyizinto zokwakha, izinsizakalo, njll. Ngakho-ke kuleli phuzu ngeke ngiqhubeke nokunaba. Ngalesi sici esithile, sokukhula komnotho kusuka ku-IT naku-intanethi, ngincoma ukuthi kufundwe i-athikili esanda kushicilelwa ku-Wired enesihloko esithi Izwe LikaNerd. Sisebenza Nje Lapha (http://www.wired.com/business/2012/11/tech-trickle-down/) echaza ukuthi ukuqhamuka kwala "ma-nerds" acebayo kudala imisebenzi, okuthi ngandlela thile kube ukwabiwa kabusha kwengcebo eyakhiwe, kuyo uzothola nokuxhumana nabanye ngesihloko esifanayo.
Ngokuqondene nendima yesibili, ngabe ukhona umuntu omaziyo "onombono" ongagcini echichima "umbono" wakhe kwabanye abantu abavamile? Lokho laba ababili abakufezile, okungenani kuze kube manje, kube nomthelela ekuthuthukiseni okuncane kulo mhlaba, okuyinto ngeshwa engeke ishiwo ngabanye abaningi abathi ngokufakwa "kombono" wabo uqobo baneqhaza ekwenzeni izinto zibe zimbi kakhulu. Ngokwami ​​nginovalo lokuthi ama-bureaucracies nama-partycracies ngaphezu kwezinkampani, kukhombisile ukuthi kuyingozi kakhulu esintwini.
Sonke siyavuma ukuthi i-Intanethi KUMELE ilawulwe nokuthi, empeleni, isivele iyalawulwa. Umthethonqubo wokuthi, futhi SONKE siyavuma, kufanele ufune ukuvikela amalungelo abasebenzisi be-Intanethi.
Kodwa-ke, ukulinganiselwa komthethonqubo okhona njengamanje kunomsuka wawo kumhlaba wonke we-Intanethi uqobo nasendaweni yamandla wamazwe. Ukuphela kwendlela "yokulwisana" nale nkinga ukubambisana kwamazwe omhlaba nokusayinwa kwezivumelwano zamazwe omhlaba.
Ngalo mqondo, kunemigqa emi-2: lowo ophakamisa ukuthi izivumelwano kufanele kufinyelelwe kuzo ngaphakathi kohlaka lwe-UN (okuthiwa yiwona mkhakha wentando yeningi omhlaba jikelele) kanye nezinye eziphakamisa ukusayinwa kwezivumelwano zamazwe ahlukahlukene (icala leNgqungquthela yaseBudapest Ngishilo futhi lokho kuthuthukiswa yi-European Union, i-US neJapan).
Umbono "ovulekile" owushoyo - i-Vint Cerf's, ngokwesibonelo - uvame kakhulu e-United States. Kucabanga ukuthi, njengoba ngishilo, ukuthi konke ukungenelela kombuso kubi futhi kuyasola. Ukuze bathethelele le ndlela yokucabanga, banikeza njengesibonelo "amava amabi" aseCuba, eSyria, eGibhithe, eChina, njalonjalo. Vele babhekene "nokungenelela kombuso omubi", okwenziwa kube kubi kakhulu, njengoba uphakamisa, ngokuthi umbuso kufanele ubekhona ukuze kuzuze izakhamuzi zawo. Kodwa-ke, le ndlela yokucabanga iyakhohlwa ukuthi kunezinye IZINHLOBO zokungenelela zombuso ezingeyona nje eyingozi kepha ezidingekayo ekusebenzeni kwe-Intanethi nasekuvikeleni amalungelo ezakhamizi zayo.
Mhlawumbe nginephutha, kepha ngithola umbono wokuthi uphikisana nanoma yiluphi uhlobo "lomthetho wamazwe omhlaba" we-Intanethi. Yebo, sonke siphikisana nokuvinjelwa kukahulumeni waseChina; Yebo, sonke siphikisana nohulumeni waseCuba ukukhawulela ukufinyelela kwe-Intanethi. Kodwa-ke, uma kukhona "umthethonqubo we-Intanethi", KUFANELE ukuthi kufanele kube ngowamazwe omhlaba jikelele ngenxa yobunjalo be-Intanethi futhi "umthethonqubo wamazwe omhlaba" onjalo ungavunyelwa yiZwe kuphela.
Isibonelo, ubulungiswa baseBrazil abukwazanga ukubamba isigebengu saseRussia esihlasela iChina amaseva (atholakala e-USA) ebhange laseSpain lapho isakhamuzi saseBrazil sifake khona imali yaso. Kwanele ukukhulisa lokhu ngawo wonke ama-akhawunti asebhange umkhonyovu awukhohlisile ukuze abone ubukhulu benkinga. Yibuphi ubulungiswa obunamandla: lelo lizwe lapho kutholakala khona amaseva, lelo lobuzwe be-hacker, lelo lezwe okwenziwa kulo umkhonyovu, lelo lobuzwe bomuntu othintekile? Kwenzekani uma ubugebengu bungahlukaniswa kuleliya lizwe noma imithethonqubo ingabuyekezwa ukufaka ubugebengu bekhompyutha? Futhi-ke ... lawa angama-vertices amabili wenkinga.
Elinye iphuzu lokuphawula kwakho kokugcina kubonakala kimi ukuthi lifanele ukunakwa. Angishongo ukuthi "i-inthanethi yamahhala" (cabanga ngakho: mahhala kubani? Kuyacaca ukuthi kunombono "ongemuhle" woMbuso kulo mbono) uthanda ukufakwa kwamaphethini amasiko asenyakatho. Engangiqonde ukuthi lo "mzabalazo" ophakathi kwamazwe ukubona ukuthi "ungalawula" kanjani i-Intanethi ngokusobala ngumzabalazo wezintshisekelo (ongeza ezithakazelweni zohulumeni abaphethe kepha nezinkampani ezikhona kulelo zwe). Okubili okulula ukubabona ohulumeni "abangomashiqela" abafuna ukulawula i-Intanethi ukugwema ukuketulwa, njalonjalo. Kodwa-ke, amanye amazwe entando yeningi "anedumela" elingcono nawo afuna ukulawula i-intanethi ngomqondo ongemuhle - efuna ukukhulisa amandla okulandela umkhondo, ukulawula nokulawula. Icala elijwayelekile yi-United States, nanamuhla enomthethonqubo we-GESTAPO ovumela uhulumeni ukuthi alandelele hhayi i-Intanethi kuphela kepha nohlelo LOKUTHUTHUKISANA LWONKE lwalelo zwe. Ngincoma ukuthi ufunde i-USA Patriot Act.
Umthetho i-USA-Patriot Act uqukethe izindatshana eziningi eziqhuma amalungelo nenkululeko yomphakathi emisiwe. Izinhlinzeko eziningi zomthetho azihambisani noMthethosisekelo, zinciphisa ibhalansi yamandla phakathi kwezikhungo ezahlukene zikahulumeni, futhi amandla lawo uwahambisa ezinkantolo zezobulungiswa aye emabuthweni okuphepha.
I-ICANN ikuleloya lizwe namuhla.
Ngendlela efanayo, kukhona labo abagqugquzela iSivumelwano saseBudapest. Kuyisivumelwano samazwe omhlaba (labo abanquma ukunamathela abangakwazi ukusiguqula - ake sicabange ukuthi amalungu okuqala yiYurophu, iMelika kanye neJapan) ahlanganisa uchungechunge lwe- «ubugebengu bamakhompiyutha», phakathi kwawo ongafanekeli ukwebiwa kobunikazi kuphela, umkhonyovu, njll. kepha futhi "namacala empahla yokusungula." Ngokuqondile, lawa mazwe afuna ukufihla ukuvikelwa kwezintshisekelo zawo - funda, izintshisekelo zezinkampani kulawo mazwe ezihlobene nempahla yengqondo "amalungelo" - ngaphansi komcabango wokulwa nobunye ubugebengu lapho kukhona ukuvumelana okukhulu ukulwa nabo (i-pedophilia, umkhonyovu , njll.).
Akufanele ikhohlakale ukuthi kumongo wokuqhamuka kwe- "izinsimbi zamasiko asenyakatho» (imaphi ama-movie oya ukuwabuka ebhayisikobho? Ulalela muphi umculo? Yiziphi izincwadi ozifundayo? Ugqoka kanjani?), Ikakhulukazi iNyakatho Melika, «ukuvikelwa kwempahla" enobuhlakani "kusho ukuthi ukuzivikela kwezintshisekelo zalawo mazwe.
Le nkinga idlula ezingxoxweni ZONKE "zokulawulwa kwe-inthanethi."
Uyabona, abekho abangcwele kulolu daba: neRussia neChina abafuni "umthetho" omsulwa; hhayi i-United States noma i-Europe.
Umbuzo onzima osalokhu uphakathi kwepayipi uthi: uma ukulawulwa kudingekile futhi okuwukuphela kwendlela yokufeza lowo mthetho ngukubambisana nezivumelwano zomhlaba wonke, hlobo luni lokungenelela okufanele amazwe ethu aluvikele (ngikhuluma, ngokwesibonelo, kusuka eLatin America)?
Uxolo ngokungiphikisa, kodwa kuyacaca ukuthi "Asivumelani sonke ukuthi i-Intanethi KUFANELE ilawulwe", okuyiqiniso ukuthi baningi abanentshisekelo yokulawula i-Intanethi, okungafani. Mayelana nokuyibeka ezandleni ze-UN, ngabe yi-UN efanayo lapho, eminyakeni embalwa eyedlule, iLibya yafika yangusihlalo woMkhandlu Wamalungelo Abantu? Uma kunjalo, ngithi: ngiyabonga, kodwa cha ...
Bheka, zonke izibonelo ozibeka ngobugebengu obenziwa kwinethiwekhi nezinye eziningi, ziyakwazi ukuxazululwa ngezindlela ezisunguliwe njengamanje kanye nokubambisana phakathi kwezinhlaka zokuphoqelela umthetho, kunezibonelo eziningi ukuthi kungenzeka, impela lokhu kufinyelelwe lapho kuba nokuqondana phakathi kwemithetho yamazwe abandakanyekayo ekuhlukanisweni kobugebengu, njengoba kwenzekile ekuqedweni kwamanethiwekhi axhumene ne-pedophilia, okwenze izindaba emaphephandabeni lapho ufinyelele khona; Manje, kwenzekani ngawo wonke amacala? Yebo, izinto ezimbili, ukuthi akukho ukuqondana okwehlukanisweni noma ayikho intando engxenyeni yamazwe yokubambisana. Endabeni yokuhlukaniswa kwesenzo njengobugebengu, sinesibonelo esiyingozi kakhulu endabeni yamalungelo empahla yengqondo kanye "nobuqola", lapho bahlose ukulawula nokubeka ukwehlukaniswa kokwephulwa kwempahla yengqondo njengobugebengu isilinganiso sezintshisekelo zamaqembu anentshisekelo yokugcina nokwelula imikhawulo yawo. Ngiyethemba ukuthi kulolu daba siyavumelana ukuthi ukulawulwa kwe-Intanethi kusuka kulezi zakhiwo kuzoba yingozi kubasebenzisi abaningi.
Ngakolunye uhlangothi, ingxenye enhle yobugebengu bamakhompiyutha obuhlobene nokwebiwa kobunikazi nezinombolo zamakhadi asebhange njengamanje ilawulwa ama-mafia, ingxenye enhle yawo eseMpumalanga Yurophu, lapho ethanda ukujeziswa khona, ngenxa yomthetho omubi noma ngokumane ubheke ukuvikelwa okufihliwe kwezinhlangano zokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho zalawo mazwe, okuvame ukuba matasa ukuqapha izintatheli ezingakhululekile kuhulumeni kanye nezakhamizi ezilula ezingathobeli.
Ngiyabonga ngesincomo sokuthi ungifundele iPatriot Act, lapho nje ngithola isikhathi ngizobuye ngiphinde ngiyibheke, ngoba sengivele ngiyifundile ngenkathi ikhangiswa kudala futhi yebo, kuyiqiniso ukuthi iyaphikisana amalungelo nenkululeko, kepha ngale ndaba kuseyizikhalazo eziningi eziqhubekayo ngaphambi kwezinkantolo ezifakwe yizakhamizi ezejwayelekile noma izinhlangano ezithintekayo kulezi zindaba futhi ezingakabi nazo izimemezelo eziqinile. Kulolu daba, sonke siyathanda ukuveza umbono wethu futhi sigxeke umakhelwane "ongakhululekile" wasenyakatho, ngaphandle kokubheka ukuthi izikhathi eziningi, imithetho yethu "eningizimu" ayinangqondo futhi iyingozi enkululekweni yomphakathi, kodwa-ke, uma "kungokwethu" akunandaba.
Ukuphawula kwakho kuqukethe isitatimende esiphikisana nomoya ojwayelekile wokuphawula kimi, ngoba uthi “Njengoba ubona, abekho abangcwele kulolu daba: iRussia neChina abangafuni 'umthetho' ongenacala; kanjalo ne-United States noma i-Europe ", lapho-ke, asikwazi yini ukuphetha ngokuthi BONKE labo abanesifiso sokulawula i-intanethi banezintshisekelo ezingamanga? Uma kunjalo, ngakho-ke akukho mithetho edingekayo.
Ngicabanga ukuthi uma amazwe ethu engavikela okuthile, njengoba usho, kwenzelwa ukwenza i-intanethi itholakale kuwo wonke umuntu, ngaphandle kwemingcele, futhi isebenzise izinsizakusebenza nemizamo yokuyilawula ukuxazulula ezinye izinkinga ezisithwalisa umthwalo omkhulu, njengokuhlehla kwezobuchwepheshe, imithetho yekhulu leshumi nesishiyagalolunye ukuthi Basaphila, ukungavikeleki kwezakhamizi kanye nokunye okude kakhulu futhi okungumthwalo wethu futhi okungekho omunye umuntu, ukuyeka ukuzizwa "njengezisulu" zomuntu ngasikhathi sinye futhi sithathe imithwalo yethu yemfanelo.
Futhi ngiyabonga kakhulu ngokubamba iqhaza kule mpikiswano, ngenza ngempela ...
Haha! Siyabonga ngokucabanga ukuthi ngivikela umthetho we-Intanethi nge-UN. Angikaze ngiyisho into enjalo.
Okwesibili, akulona iqiniso ukuthi iChina, iRussia, i-US neYurophu konke. Angazi ukuthi uhlala kuphi, ngihlala kwenye ingxenye yomhlaba. Kukulo mqondo lapho ngishiye isigaba sokugcina sivulekile ukuze sicatshangwe. Yisiphi isikhundla amazwe ethu okufanele asithathe?
Ngalo mqondo, ngivumelana ngokugcwele nalokho okuphakamisayo esigabeni sokugcina: «ukwenza i-intanethi itholakale kuwo wonke umuntu, ngaphandle kwemingcele, nokusebenzisa izinsizakusebenza nemizamo yokuyilawula ukuxazulula ezinye izinkinga ezisithwalisa kakhulu, njengezobuchwepheshe ukubuyela emuva, imithetho yekhulu le-XNUMX esasinda, ukungavikeleki kwezakhamizi kanye nokunye okunjalo okuyijoka lethu futhi okungelona elomunye umuntu, ukuyeka ukuzizwa "njengezisulu" zomuntu ngasikhathi sinye bese sithwala imithwalo yethu yemfanelo. »
Ngicabanga ukuthi ukungavumelani kwethu okukhulu kuleli phuzu: Ukulawulwa kwe-inthanethi akuyona inketho. Ekuphawuleni kwakho kwangaphambilini wena ngokwakho uthe LOKHO SEKUKHONA. I-Intanethi isivele ilawulwa. Inkinga ukuthi sesiphokophele kumthethonqubo weBAD. Phakathi kwezinye izinto, ngenxa yezintshisekelo engizichazile.
Isiphakamiso sami silwela ukudala isikhundla sesithathu. Kalula nje. Uma ufuna ukuhlala ezweni lamaphupho, lapho "i-Intanethi imahhala", khona-ke (ngokubona kwami) uhlala udidekile. Akusizi ngalutho ukuthi kukhona ohulumeni abephula unomphela amalungelo abasebenzisi (amacala acace bha okuyiCuba, iChina, iRussia, kepha ne-US, njll.), Nezinkampani ezinamandla omhlaba wonke ngisho kwezinye izimo ezinkulu kuneziningi amazwe (iGoogle, iMicrosoft, njll.) nawo aphule iningi lalawo malungelo.
Uma ufuna ukulandela isiphakamiso seGoogle, qhubeka. Angiqiniseki "ngokuzidela" kwakhe. Ngiyaxolisa.
Uxolo uma bengingakuqondi, kepha izigaba zokuqala ezi-3 zokuphawula kwakho kwangaphambilini, okuvela ngaphansi kwesidlaliso se- «Pablo», zisho ngqo lokho, noma okungenani, zisivumele ukuba sikuhumushe, ngoba ukuphawula kwakho ngicabanga ukuthi kuveza lokho umbono wakho, uma kungenjalo Kulungile, kusho mina.
Ngakolunye uhlangothi, ngithi kuphi i-inthanethi ISELULAWULWA? Ukuthi ezweni ngalinye kunemithetho noma imithethonqubo kulokhu akusho ngandlela thile ukuthi i-intanethi, inethiwekhi, njengomkhuba womhlaba wonke ilawulwa . Futhi cha, angihlali "ezweni lamaphupho" yize NGIBONA ukuthi i-inthanethi imahhala, ngomqondo wokuthi ayinaye "uhulumeni" oyilawulayo futhi ayihlolisise emhlabeni jikelele. Hleze kube khona ukungabaza ngesikhundla sami: Ngincamela i-intanethi "eyingozi" futhi "ekhululekile" njengalena ekhona namuhla kune "evikelekile" futhi "elawulwa" kakhulu yinoma ngubani, kungaba yi-UN, ngokungasebenzi kwayo okuyisaga ukwengamela ngokweqile noma iqembu "labamele ngentando yeningi abangenantshisekelo nabangakhethi" wanoma iyiphi inhlangano, inkolo noma ukuthambekela kwezepolitiki. Uma lezi zitatimende zingenza ngibonakale "ngingalungile ngokwezepolitiki" akunandaba, ngikhona impela.
Futhi yebo, ngiyasivuma isiphakamiso seGoogle, uma ungakwenzi, unelungelo eliphelele, angizenzi sengathi abanye abantu bacabanga futhi benze njengami; Umhlaba ungadina kakhulu, ngakho-ke uma ngincoma ukuthi uhlole iziphakamiso ngokuqukethwe kwazo ukwedlula ukuthi ngubani ozifakayo, khumbula umusho ka-Albert Camus osebenza kahle kuleli cala: «Umuntu akanqumi ukuthi umcabango ucabangani ngempela okulungile noma kwesobunxele »
Ngokuqondene nezwe engihlala kulo, awukwazanga ukuqagela okwamanje? Woza, kulula kakhulu ukukwenza ... futhi NO, impela akuyona i-US, ungacabanga kanjani ngayo? 😉
Yize ngivumelana nani nonke, kunokuthile okufanele nikucabangele kuqala. Njengoba i-intanethi ingenaye umnikazi uqobo, imininingwane esatshalaliswa futhi igcinwe kuma-node ahlukahlukene igcinwa isikhathi esithile bese iyahlanzwa. Lolu lwazi lukhona futhi lungasetshenziswa ngabasebenzeli abahlukahlukene bakahulumeni nabazimele ngemisebenzi eyahlukahlukene ngaphakathi kwemithetho ehambelana nezwe ngalinye nezivumelwano ezisayinwe yibo. Lokhu okungenhla kunikeza ithuluzi elingaba nokusetshenziswa okuhlukile futhi lokhu kungaba yinkinga ngokuya ngokukhanya kusukela lapho kubonakala khona.
Inkululeko ivame ukudideka nokuziphatha okuxekethile, kepha njenganoma yiliphi ithuluzi ingasetshenziselwa okuhle nokubi. Umthethonqubo unengqondo uma futhi kuphela uma ungadluli ekukhawuliseni okungenziwa nokungangenziwa. Le yenkululeko eyisisekelo engenakuxoxiswana ngayo, futhi yinto esivele ichaziwe kunoma yimuphi umthetho, ukuze wena ngokwakho wazi uma wenza icala.
Kuhle kakhulu ukubonwa kwakho. Ngokuqondene neyokuqala, yize ngingavumelani ngokuphelele nawe ukuthi i-inthanethi "ayinaye umnikazi", ngikwazi ngaphezu kokwazi ukuthi zonke izingodo zethu zokuphequlula zigcinwa, ngandlela thile, ezindaweni ezahlukahlukene ezidlulisa kuzo ulwazi , ngakho-ke, ezandleni zama-ejenti ahlukahlukene owakhulumayo, okuthi noma ikanjani kube yinani okufanele likhokhelwe ukuxhumana esikujabulelayo, futhi yebo, kuyiqiniso ukuthi kuyingozi, kepha kufanele kukhethwe phakathi kweThe ingozi eboniswa ukusetshenziswa kwenkampani kanye naleyo uhulumeni angayinika yona, ngincamela ukuzibeka engcupheni ngeyokuqala.
Ngakolunye uhlangothi, ngiyaqonda ukuthi uma ukhuluma "ngamanyala" ubhekisa ezenzweni ezigcina zakha ubugebengu, nokuthi empeleni ziJwayele ukufanekiswa yimithetho yamazwe amaningi, kungakhathalekile ubuchwepheshe obusetshenziselwe ukuzenza; Ake ngichaze, i-pedophilia yangaphambi kokuvela kwe-intanethi, njengokuntshontshwa kobunikazi, okwenzekayo ukuthi nge-IT, izindlela zokuzinikela "ziyenziwa lula". Esikhundleni sokubeka imikhawulo nezilawuli kwinethiwekhi, kubonakala kimi kusebenza kakhulu ukuthi izinhlaka zamaphoyisa zivuselele izenzo zazo ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe futhi zishushisa isigebengu futhi zingacabangi bonke abasebenzisi benethiwekhi abasolisayo ngokungena kuye kuphela. Lapha, nginikezwe ukukhetha phakathi kwezingozi zenkululeko ehunyushwe kabi kanye nokulawulwa kwe-Intanethi, ngaphandle kokungabaza ngithanda ubungozi benkululeko, ngoba njengoba uManuel Azaña asho ukuthi «Inkululeko ayiwenzi amadoda ajabule, imane ibenze babe amadoda».
Ngivumelana nawe ngokuphelele, ngikholwa ukuthi kungenzeka kakhulu ukuthi izinhlaka zokuqapha ezinjengamaphoyisa zivumelane nezimo zobuchwepheshe kunolunye uhlangothi.
Ngabe lokhu kulawula kuzosiholela kohulumeni bezenhlalo?
Ukubheja kwe-Intel kuma-CPU athengiswe kubhodi yomama
Dala i-Cyber ​​Café mahhala nge-GNU / Linux